CC Shakuur: Farmaajo waxa uu rabaa inuu sameeyo is-qarxis siyaasadeed, inta la jaalka ahna laba far u taago - Caasimada Online
Home Warar CC Shakuur: Farmaajo waxa uu rabaa inuu sameeyo is-qarxis siyaasadeed, inta la...
CC Shakuur: Farmaajo waxa uu rabaa inuu sameeyo is-qarxis siyaasadeed, inta la jaalka ahna laba far u taago
Muqdisho (Caasimada Online) – Siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah xubnaha Midowga Musharraxiinta Mucaaradka oo war qoraal soo saaray ayaa ka hadlay kulanka maanta ee golaha shacabka iyo sheekooyinka ku xeeran.
Siyaasigan oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in Farmaajo uusan dooneyn marnaba in dalka ay ka dhacdo doorasho guud oo loo wada dhan yahay.
“Farmaajo waxaa ka go’an in uu hor istaago wadda kasta oo lagu gaari karo doorasho wadar-oggol ah oo si nabad ah ku dhacda. Wuxuu doonayaa in Golaha Shacabka oo muddo xileedkiisii dhammaaday, Aqalkii Sare na ka maqan yahay uu muddo kordhin sharci dari ah u sameeyo. Wuxuu kaloo ogyahay in Dowlad Goboleedyada, mucaaradka iyo Beesha Caalamka aysan aqabali doonin,” ayuu qoraalkiisa ku yiri CC Shakuur.
Sidoo kale musharrax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa tilmaamay in arrintan ay tahay is qarxin siyaasadeed, balse loo baahan yahay in laga feejignaado.